Eric Rakotomalala | Fampiratiana sary [Genève, CH] – i am a malagasy in genève
9 mai 2007 30 avril 2010
Eric Rakotomalala | Fampiratiana sary [Genève, CH]
© Eric Rakotomalala
Nijery fampiratiana sary kanto mikasika an’i Genève aho androany. Teo am-panoratana fankasitrahana tao anaty boky volamena dia akory ny hafaliako fa hitako nandalo teo ilay Malagasy mpaka sary.
Androany vao nihaona izahay sy i Eric Rakotomalala saingy efa hitako ny endrik’i « pixera », raha nitsidika ny blaogy vao nosokafany aho. Narosoko ny tanako hisaotra azy nohon’ny halavorarin’ireo sary nataony dia tafaresaka fohy izahay.
Ao amin’ny io fivarotana « Fnac Rive-Genève » io izy no mampanasa ny sariny [développer] ary raha nahita ny hakanton’ireo sary ny mpiasa tao dia nanontany raha hanaiky ny hampitratiany ireo sariny ireo i Eric. Io izany no fampiratiana voalohany nataony ary azoko ambara fa amin-talenta no ampiasany ny « grands angles» sy ny «ultras grands angles» na « fish-eye ».
Ampanetren-tena no anambaran’i Eric fa tsy mpaka sary maty hanina izy [pro] fa izay tsapany ihany no alainy sary. Tsotra anefa izy, ka raha misy ilana azy dia mety azo hindramina izy haka sarim-danonam-pianakaviana toy ny mariazy sns …
« Mahalaza tsy mila kabary… » [tout dire sans un mot…] no lohatenin’i ny fampiratiana ataon’i Eric Rakotomalala ao amin’ny « Fnac Forum Rive-Genève » [rue de Rive 16, 1204 Genève | rihana voalohany ao amin’ny cafétariat] hatramin’ny faran’ny volana Jona 2007. Marihina fa azo atao ny mividy ireo sary asehony ary ity no fampiratiana manaraka ilay nataon’i Leszek Andzel >> izay nampiraty ireo sarin’ny diany tany Madagasikara.
Bio fohy: Teraka tany Madagasikara tamin’ny taona 1976 i Eric Rakotomalala. Malagasy ray sy reny ary telo mirahalahy ry zareo. Vao roa taona monja izy no nandao an’i Madagasikara ny fianakaviany. Nivezivezy nitety tany ny tovolahy izay nahavita fianarana Injeniera. Tany Washington DC no niasany farany dia izao izy nametraka ny kitapony teto Genève tamin’ny taona 2000 izao. Ny fitiavana no anton’ny nifindrany teto ka « tsy hifindra intsony aho » hoy izy. Ary am-pijerevana ireo sariny dia tsy mila kabary tokoa fa tsapa avy hatrany fa tiany i Genève.
[sary hafa – pixera.romandie.com >>]
Posté dans ala-voly, saryTagué eric rakotomalala, Exposition, Exposition Photo, foto, madagascar, madagasikara, malagasy, malgache, photo, photographie, photography, pixeria, sarypar tomavana3 commentaires
3 réflexions sur “Eric Rakotomalala | Fampiratiana sary [Genève, CH]”
virginie Rakotomalala dit :
Voalohany dia faly izahay fa misy malagasy makasitraka ny fampiratiana an’i Eric Rakotomalala.
Koa misaotra anao izahay aminy teny mamy natolotrao ho azy.
Ny ray aman-dreniny
Virginie et Michel Rakotomalala
15 mai 2007 à 20:35
Le message que j’ai envoyé en malgache est adressé à Monsieur Tomavana.
15 mai 2007 à 22:41
Manambara zavatra amiko ireo toerana nalain’i Eric sary. Rehefa nohavaozin’ny fakan-tsariny dia mahita lafiny vaovao tsy mbola hitako hatrizay aho, miverina ho toeram-baovao mila hofantarina indray ilay toerana taloha.
Tsy misy tokony isaoranareo ahy fa i Eric no mendri-pisaorana amin’ny netezany hizara ireo sary ireo, ary maniry koa aho raha maniry ny handalinany ny talentany sy hitohizan’ny asany.
← Votsotra ve ireo 2,8 millions CHF an’i Tantely Andrianarivo taty Soisa ?
07|05|17 – Hantatiana sy Fara Andriamamonjy [Andilly, FR] →